4ta Ogosto, shaashadda iPhone 5S ayaa bilaabi doonta in lagu dayactiro dukaamada | Wararka IPhone
Dukaanka Apple wuxuu awoodi doonaa inuu beddelo shaashadda iPhone 5S laga bilaabo 4-ta bisha Ogosto
Hada hadaad dhibaato kuqabtid shaashadda iPhone 5, iPhone 5C ama haddii nasiib daro ay jabtay dhicitaan ama jug, waxaad booqan kartaa dukaanka Apple, Apple Store, halkaasoo shaqaalaha Barta Genius Bar ay ku beddeli doonaan damaanad haddii ay cilad ku timaaddo ama la bixiyo haddii ay shil ku timid. On the iPhone 5, habkan dayactirka waxaa loo isticmaali jiray in ka badan hal sano halkii laga siin lahaa qalab cusub 'dib loo hagaajiyay' macmiilka. Xaaladda iPhone 5C habka ayaa lagu dhaqmay ilaa bilowgii 2014. Ilo kala duwan, oo ay ka mid yihiin 9to5Mac, farta ku fiiqay in Bakhaarro badan oo Apple ah oo ka mid ah Mareykanka iyo Kanada bilaabay inay helaan cutubyo badan oo ka mid ah shaashadaha iPhone 5S waxayna tilmaameen in laga bilaabo Isniinta soo socota 4 bisha Agoosto Dukaamadan ayaa bixin doona adeegga beddelka shaashadda halkii qalab dib loo cusboonaysiin lahaa.
Shirkadda ayaa tijaabisay beddelka tooska ah ee dukaamada in muddo ah, muddo sannad ah kadib markii iPhone la iibinayay, in badan oo ka mid ah Apple Stores ayaa helay mashiin horumarsan oo si otomaatig ah u daryeelay kala goynta shaashadda waxyeellada gaadhay oo ku dheji qalab cusub aaladda, iyo sidoo kale cabbiraadda dareemayaasha. Macaamilku uma baahna inuu ka tirtiro macluumaadka qalabkooda si uu ugu soo raro kaydinta mar dambe, sida marka uu helayo qalab 'dib loo cusbooneysiiyey', tan iyo saacad gudahood, isticmaaluhu wuxuu ku helayaa iPhone-kiisa shaashadda cusub.
Haddii aysan ahayn dhibaato ama cillad warshad ee shaashadda iPhone 5S, dayactir shaashad cusub waxay ku kacaysaa $ 150. Aad uga jaban marka loo eego haddii aan ku nimid Apple Store iyadoo iPhone 5S gebi ahaanba la jabiyay, the beddelka aaladda oo dhammaystiran waxay noogu kacaysaa $ 269. Waa inaan sugnaa oo aan aragnaa haddii qaabkan dayactirka sidoo kale gaadhsiiyey dalalka kale ee adduunka dadka isticmaala ee ka baxsan Mareykanka iyo Kanada way ku raaxeysan karaan adeegga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 5s » Dukaanka Apple wuxuu awoodi doonaa inuu beddelo shaashadda iPhone 5S laga bilaabo 4-ta bisha Ogosto
Waa inaan sugnaa "inaan helno" haddii qaabkan dayactirka uu sidoo kale u fidiyo dalalka kale ee adduunka. "Aan aragno"
Ka faallaynta wararka, waa wax xiiso leh inay shaashadda beddeli karaan xilligan iyagoo bixinaya wixii ay weydiistaan, halkii ay ka sugi lahaayeen inay u diraan SAT, ama ugu beddelaan qalab kale oo xoogaa ka qaalisan.
Ku jawaab hanti-dhowre 037
Dukaamada aan ahayn rukhsadaha Apple, waxay horay u beddeleen shaashadaha. Xaqiiqdii, way kafiican tahay ilaa iyo intaadan haysan dammaanad qaad xoog ah, maxaa yeelay isbeddelka gacmaha Apple waa dhac waana ogahay khibrad ahaan.
Waxyaabaha kale, tusaale ahaan, waa hoosta guriga, taas oo ah aqoonsiga taabashada lagu kaydinayo ag-marinta processor-ka (ama wax la mid ah, si fiican uma xasuusto), markaa u dir haa ama haa Apple, maxaa yeelay beddelka tan kaliya suurtagal maaha.
Hagaag, aad ayaan uga niyad jabsanayaa dukaamada dhinac saddexaad, marka hore maxaa yeelay waa inaad sugto labada sano ee damaanadda ah inay dhaafto si aad u tixgeliso inaad lacag dhigan karto iyo tan labaad, waayo-aragnimadayda, qaybaha beddelka ayaa leh tayo liidata. howsha isku imaatinku waa mid waxashnimo ah, haddii aad mar labaad furto terminalka, waxaa jira qaybo dhaqdhaqaaq ah, boolal lagu waayey iyo faro laga qaaday dhammaan dusha sare (taasi waa, dufan aan waxba ka taraynin inuu qaboojiyo terminaalka) ... laakiin tani waa waayo-aragnimadayda .
Waxaa muhiim ah in la qiimeeyo waxa ugu fiican mid kasta iyo haddii aad rabto dhibco qaar ama faashad gacan-qabsi ah oo loogu talagalay iPhone-kaaga.
Iga raali noqo, laakiin aniga lafteyda ayaan hagaajiyaa iphone-ka, hadii ay dhib tahayna, maxaa yeelay waxaa jira boolal 1mm ah, laakiin taas awgeed waxaan hayaa sanduuq u eg kaluumeysato si aan wax walba u habeeyo si wanaagsan, dulqaadna ay wax walba ku suurtoobaan. Dhamaan asxaabteyda aan hagaajiyey, min guriga hoose, shaashadda, kuhadalka, makarafoonka, kamarada hore, dabacsanaanta awooda, gariiriye, batteriga, ... wax dhibaato ah kuma qabin.
Aniga ayey igu dhacday 2 jeer horeyba, habeen hore gariiriyehu wuu joojiyay shaqadii. La hadal Apple, marka hore waxay i siiyeen 2 ikhtiyaar: samee haynta wax ka badan € 500 oo ii soo dir mid ka mid ah maalmo gudahood markii ay iga helaanna, samee soo celinta, haddii ay dhacdo inaysan jirin wakiilo dibadeed, sida boodhka, tubaakada, biyaha, ... haddii kale maya waxay igu soo dallaceen € 90 si aan u beddelo gariiriye. Iyo ikhtiyaarka kale, ka sug iyaga inay u geeyaan SAT-ka Jarmalka ama Holland, ma xasuusto, dib u cusbooneysiiyay oo dib loo soo celiyay, sidoo kale miisaaniyad la'aan ama dammaanad qaad oo dammaanad ku dhaafay (waxaan ku haystay dammaanad iyo daryeel tufaax ah) . Waad ogtahay inay igu kacayso inaan badalo gariiriye, € 3 oo lagu daray rarka iyo 10 daqiiqo.
Magaaladeyda malahan iPhone SAT, kaliya Mac.waxaan iibsanayaa qayb Spain kamid ah sharciga ayaa ubaahan inay i siiyaan dammaanad 2-sano ah, haa ama haa. Marka laga hadlayo tayada, shaashadda tijaabada waxay i siinaysaa isla cufnaanta pixel iyo xallinta, ma aqaano waxaad ka hadlayso. Tayo liidata? Ma arko wax farqi ah. Waxaa intaa dheer, waxaad sameyn kartaa dib u eegis kamarad asal ah iyo bedel, waxaad leedahay tayada sawirka waxaanan kuu xaqiijinayaa inay isku mid tahay. Cadee inay jiraan waxyaalo iyo qaybo components.
Sidoo kale waa run in qof ay is yaqaaneen ay u kaxeeyeen dukaan ku yaal Paquistanis, waxayna ku qariyeen bunni ...
Waxaan kula talinayaa qof kasta oo aan ogahay in haddii aysan ku jirin dammaanad qaad ama ka fikir Apple. Waad sidoo kale ogtahay sababta, sababta oo ah taada laguuma soo celin doono, waxay noqon doontaa mid qof kale leeyahay, oo la jabsaday maalinteeda, oo Apple ayaa hagaajisa oo kuu soo dirta. Waxa loogu yeero Refurbished, oo ah 95% taleefannada gacanta dib loo rogay.
4x35 Podcast: OS X Yosemite Beta 1
PowerPoint wuxuu soo bandhigayaa Muuqaalka Soo-Bandhigaha iyo astaamo kale oo cusub